Ikhaya » izithuba » Iindaba zeAnga » I-COVID-19 iyaqhubeka nokumangalisa: Amachiza ayingombumbulu yesilivere
Iindaba zeAnga • Iindaba zokuhamba ngeshishini • Iindaba zeMpilo • Amathuba otyalo-mali • Iindaba zokuhamba Kuwait • Iindaba zaseNigeria zokuhamba • omnye • ukwakha uhambo kwakhona • Iindaba zoKhenketho • Iindaba zothutho • Iindaba zokuHamba • Iimfihlo zohambo • Iindaba eziShukumayo
I-COVID-19 iyaqhubeka nokumangalisa: Amachiza ayingombumbulu yesilivere
URichard Maslen weCAPA-iZiko lezoPhapho, wenza intetho ebonakalayo egxile kwicandelo lezophapho kuMbindi Mpuma naseAfrika.
Njengobhubhane wecoronavirus ofike ngesilumkiso esincinci, ukutshintsha kweDNA kunye notshintsho olwenzekayo, kubonisa ukuba ungaqhubeka ukusothusa.
Xa imida ivaliwe ngokufanelekileyo kwaye kungathintelwanga ukuhamba, kuthintela ukuba ukuhamba ngenqwelomoya kwilizwe lonke kuhlala kuthintelwe kakhulu.
I-CAPA yayilumkisile ukuba ukufika kweyeza lokugonya akuyi kuba yimbumbulu yesilivere.
Incoko kaRichard Maslen ithathela ingqalelo uphuhliso lwakutshanje kwimimandla kwaye ijonge ngakumbi kwimakethi ethile kwindawo nganye. Kule nyanga, kugxilwe eKuwait naseNigeria kwaye kutheni iyeza lokugonya le-COVID-19 lingelilo imbumbulu yesilivere. URichard uqala:
Emva kokungenela unyaka mhlawumbi sinethemba eligqibeleleyo ebesikhe salibona iinyanga ezininzi, ubunyani beenyanga ezimbini ezidlulileyo busikhumbuze ukuba akukho nto inokuthi ithatyathwe lula. Njengobhubhane wecoronavirus ofike ngesilumkiso esincinci, ukutshintsha kweDNA kunye notshintsho olwandayo, kugxininisa ukuba ngelixa sikholelwa ekubeni ekugqibeleni sinokufumana ukuqonda ngentsholongwane ebulalayo, ingaqhubeka isothuse. Kwiindawo ezininzi zamaza amatsha obhubhane athethe ukuba ukonwabele inkululeko yexeshana, imithetho engqongqo iphinde yamkelwa ethintela ukuhamba.
Xa imida ivaliwe ngokufanelekileyo kwaye kungabalulekanga ukuhamba kungathinteleki oko kuthetha ukuba ukuhamba ngenqwelomoya kuya kuhlala kunzima. Kodwa, ngaba simangalisiwe ngokwenene?
apha eCAPA besilumkisile ukuba ukufika kweyeza lokugonya akuyi kuba yimbumbulu yesilivere. Ngokuqinisekileyo limele inyathelo elibalulekileyo kwihlabathi elitsha le-post-COVID, kodwa elisahleli lide kude. Ibali elilungileyo kulwandle lweendaba ezimbi lalifana ne-oasis yesiqithi esisentlango kwaye lasihendisela ekukholelweni ukuba ubomi buya kuba ngcono. Izakwenza njalo, kodwa inyani yeyokuba izakuhlala ixesha elide kwaye ngoku izinto zisenokuba nzima ngakumbi kunanini na kwiinqwelomoya kwiinqwelo-moya zehlabathi nakumacandelo amaninzi oshishino abadlala indima ebalulekileyo ekuxhaseni. Uninzi lweenqwelo-moya ngoku ziphinde zaqala ukusebenza kwakhona ukuya kuthi ga kwinqanaba elithile, kodwa ezi zihlala zikumanqanaba angaphantsi kakhulu kunalawo abonwe ngaphambi kwengxaki yezempilo yoluntu. Izithintelo zendlela ezikhoyo ukunqanda ukusasazeka okuqhubekayo kwe-COVID-19 kwaye amanye amaza osulelo ayaqhubeka nokwenza buthathaka ekubuyeni kwamazwe aphesheya, nangona uhambo lwasekhaya lubonakalise iimpawu zokuchacha.
UMbindi Mpuma uchaphazeleka ngokukodwa zizithintelo eziqhubekayo zokuhamba kwamazwe aphesheya kunye neenqwelomoya ezinkulu kakhulu ezazisebenza ngaphambili ezazisasazeka kwihlabathi lonke kwaye zixhomekeke kubakhweli bamanye amazwe.
Page 1 of 7 Edlulileyo Okulandelayo